» चितवनमा २५ मिटर भित्रको संरचना हटाउन अल्टिमेटम, हेटौंडामा के हुन्छ ?
चितवनमा २५ मिटर भित्रको संरचना हटाउन अल्टिमेटम, हेटौंडामा के हुन्छ ?
डिभिजन सडक भरतपुरले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय राजमार्गभित्र पर्ने संरचना हटाउन अल्टिमेटम दिएको छ । विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय राजमार्गको सडक सीमामो २५ मिटर दायाँ बायाँ र भवन सीमासहित ३१ मिटर दायाँबाँयाका क्षेत्रहरु खाली गर्न भनेको हो ।
डिभिजन सडक कार्यालयले राजमार्ग क्षेत्रभित्र सवारी र पैदल यात्रुलाई समेत अवरोध पुग्ने तथा सेटब्याकलाई अवरोध पुग्नेगरी लिंक सडक निर्माण गर्ने, भवन संरचना निर्माण गर्ने, नाली पुरेर बाटो बनाउने, होटल ब्यवसाय गर्दा सडक सीमा प्रयोग गरी अव्यवस्थित रुपमा सवारी रोक्ने, घर किनाराबाट पानी सडकतर्फ बगाउने जस्ता कार्यले सडकमा धेरै क्षति हुने गरेको र यसले मर्मत कार्य समेत अनावश्यक रुपमा बढेको भन्दै त्यसो नगर्न सचेत समेत गराएको छ ।
कार्यालयले सडक ऐन २०३१ बमोजिम सडक सीमा अतिक्रमण रोक्न र सुरक्षित यातायात सञ्चालन तथा सडक सीमा सुरक्षाका लागि भन्दै सूचना प्रकाशित गरिएको जनाएको छ । सूचनाको अटेरी गरेमा जुनसुकै बेला पनि त्यस्ता संरचना हटाइने समेत कार्यालयले चेतावनी दिएको छ ।
राष्ट्रिय राजमार्ग स्तरोन्नति अन्तर्गत यस कार्यालय मातहत पर्ने सडकको स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा यस्तो सूचना जारी गरिएको डिभिजनका सूचना अधिकारी शिव खनालले जानकारी दिए । उनकाअनुसार अहिले सो ठेक्का अन्तिम स्वीकृतिको चरणमा छ ।
चितवनमा राजमार्ग भित्र पर्ने संरचना हटाएर दायाँबायाँ ३१ मिटर खाली गर्ने सूचना जारी गरेसँगै हेटौंडामा पनि चर्चा सुरु भएको छ । हेटौंडाको बजार क्षेत्रमा रहेको राजमार्गको दायाँबायाँ २५ मिटर भत्काउन पटकपटक सूचना जारी भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसवर्ष पनि हेटौंडाको राजमार्ग क्षेत्र भित्र पर्ने संरचना हटाउन सूचना जारी हुने तयारीमा रहेको जनाइएको छ ।
वाग्मती प्रदेशको राजधानी समेत रहेको हेटौंडा बजारमा सडक विस्तार नहुँदा अहिले नै ट्राफिक जाम सुरु भइसकेको छ । तर वाग्मती प्रदेश सरकारले भने बजार क्षेत्रमा २५ मिटर सडक विस्तार नहुने बताउँदै आएको छ । विकल्पमा रात्तीको खोलाको किनारबाट सडक निर्माण हुने जनाइएको छ ।